ပရင့်ထုတ်တာလေးသိချင်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
မူလ › Graphic › AutoCAD
July 2009 edited August 2009 in AutoCAD
AutoCat Software စက်ထဲမှာမရှိပဲနဲ့့ပရင့်ထုတ်ယုံလေးထုတ်ချင်ပါတယ်။ သူ့ဖိုင် extension name က .dwg နဲ့ဆုံးပါတယ် .... ဘယ်ကနေဘယ်လိုဖွင့်ပြီးထုတ်ရမယ်ဆိုတာလေးသိတဲ့သူများရှိရင် ဖြေပေးပါနော်။
graphic ဖိုင်တော်တော်များများကိုမူရင်း software မရှိပဲ ပုံထုတ်လို့ရပါတယ်
ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ။ အဆင်မပြေရင်ပြောပါ။
kopauk wrote: »
ဒေါင်းလို့ မရဘူး အကို .... File not found ဖြစ်နေလို့
Ice_Cream wrote: »
လင့်ကောင်းပါတယ်ကိုIce_Cream ရဲ့။ ပြန်စမ်းကြည့်ပါဦးလား။ solidconverterdwg.exe (9.02 MB) လို့ပြနေပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
crack pls ????:O:O it's free for only 15 days ..
icecream ရေ .. ဒေါင်းလို့ရပါတယ်.. သေချာစစ်ကြည့်ပါဦး
ကျွန်တော်တော့ ရက်အကန့်အသတ် software တွေကို run as date software လေးနဲ့သုံးတယ်